ယနေ့လူငယ်များနှင့် ယဉ်ကျေးမှု သိမှတ်ဖွယ်ရာ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Ideas & Plans » ယနေ့လူငယ်များနှင့် ယဉ်ကျေးမှု သိမှတ်ဖွယ်ရာ	17
“ အတက်ပညာ အလိမ္မာကို
“ ငယ်ငယ်ကသ္မီး ၊ ကြီးလာတော့မီး ” ဟူသည်နှင့်အညီ မိမိ၏ “သား”သည် အားမကိုးရပဲ “ ကျား ”ကဲ့သို့ ကြောက်စရာ သား ဖြစ်လာမည်။
ထို့နောက်တဖန် မန်လည်ဆရာတော်ကြီး၏ “ လောကဓမ္မတာ
၁၀။ လူမျိုးတွက်တာ ၊ ကြုံကြိုက်လာ၊ ညီညာဖျဖျ ၊ စွန့်စားကြ။ ဟူ၍ ဖတ်ရှုမှတ်သားထားသမျှလေးကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်…….
စရိုက်ကောင်းကြစေသတည်း…………။ ဟူ၍ ကျင့်ဆောင်…………
အရင့်ရောင် အရင့်ရောင် has written 56 post in this blog.
View all posts by အရင့်ရောင် →	Blog
mamanoyar says: ဖတ်ရတာ ဗဟုသုတ ရပါတယ်ရှင်
အရင့်ရောင် says: mamanoyar@ လေးရေ…….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1054
mayjuly says: အဲ စာတွေက အများကြီး …
ဟိဟိ အဲလိုယဉ်ကျေးတာ … :P
Khaing Khaing says: ကိုအရင့်ရောင်ရေ ……… အခုလို ပညာပေးစာပေစာသားလေးတွေကို မျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါ ….. ယဉ်ကျေးတယ် မယဉ်ကျေးဘူးဆိုတာ တစ်ခါတစ်ရံ မိဘအုပ်ထိန်းသူနဲ့သက်ဆိုင်သလို ပတ်ဝန်ကျင်နဲ့လည်း သက်ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် တစ်ချို့ကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ရိုင်းစိုင်းနေတဲ့သူတွေရှိသလို ပတ်ဝန်း ကျင်ကြောင့်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားသူတွေလည်းရှိပါတယ် ……..
Nyein Nyein says: မှတ်ထားပြီးလိုက်နာသင့်တဲ့အရာတွေကို ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးနော် ကိုအရင့်ရေ……….. မှတ်သားသွားပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဘဲဥ says: ကိုရင့် စာတွေကိုဖတ်ပီးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှက်တောင်ရှက်တယ်
သားဦး၊မြေးဦး says: ကိုအရင့်ရောင်ရေ
အရင့်ရောင် says: အဲလိုလိုက်နာဖို့ပဲ လိုတာပါဗျာ…………
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9991
မောင်ပေ says: ဖတ်ပြီးမှတ်သွားပါတယ် ဗျို့ ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1832
surmi says: ကျုပ်ကိုများဆုံးမနေသလားထင်ရတယ်
ကိုရင်မောင် says: အရင့်ရောင်ရေ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2730
kyeemite says: သားသမီးတွေပေးဖတ်ဘို့
ဘဲဥ says: မေ့သွားလို့ …… တစ်ဆယ်ယူသွားလိုက်အုံးမယ်နော်
etone says: အင်း .. ဒီတခါတော့ လွတ်လွတ်ကင်းကင်းတင်လို့ ..၀င်မန့်ပါဦးမယ် …(ဂေဇက်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး သူ့ချစ်သူဆီရေးတဲ့ ကဗျာမဟုတ်တာကြောင့်လည်း ပါတယ် :P ) ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ စာရိတ္တနဲ့ … ဘာမှ မဆိုင်တာကိုတော့ ထောက်ခံတယ် .. ။
kai says: ရှေးစွန်းစွဲ..ကွန်ဆာဗေးးးးးတစ်တွေရေးတဲ့.. စာတွေ..အတွေးအခေါ်တွေကို.. မိုဒမ်နှိုက်စ်လုပ်သင့်ပြီလို့ထင်မိတယ်..
မည်သောဟူရှင့် ” ဆိုတာမှာ.. ယူအက်စ်ဆို.. ကိုယ့်ကလေးကို.. ကျောင်းပို့ချိန်..ကျောင်းမပို့ရင်. စာသင်ရမဲ့အရွယ်..စာပေးမသင်ရသ်… အစိုးရက..မိဘကို.. ဆိုရှယ်ရုံးပို့ပြီး…ပညာပေးမယ်..
သားသမီးနဲ့..မိဘ.. ရန်တိုက်ပေးတာမပါ..။ ဘေးလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက.. အစိုးရကတဆင့်..ဥပဒေထုတ်ပြီး.. သတ်မှတ်လုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့.. ကျန်တာတွေ.. ချဲ့တွေးးစဉ်းစား… ဆွေးနွေးကြည့်ကြစေလိုတာပါ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7074
etone says: သဂျီးရဲ့ ..သူတို့ နိုင်ငံမှာ .. အစိုးရကိုက .. လူတွေအတွက် အလုပ်ကိုင်၊အခွင့်လမ်း ခံစားခွင့်တွေ .. လုံလောက်အောင်ပေးထားတာ .. ဒီတော့ သူတို့ကလေးတွေ ကျောင်းမပို့ပဲ ..အလုပ်ထွက်လုပ်ခိုင်းတာမျိုး … မရှိလောက်ဘူး .. ဒီမှာက ကလေးလည်း စကားပြောတတ်လျှင် တောင်းစားလို့ ရတယ် … စာနည်းနည်း တက်လျှင် … ဈေးရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ ……. စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး .. ထအော်ဖို့တောင် …. လိပ်ပြာမလုံဖြစ်မိပါတယ်
lazy boy says: အကို အရင့်ရောင် ရေအခုလိုမှတ်သားစရာကလေတေ တင်ပေးတဲ့အတွက်
Comments By PostMacro 2013-1.2 - KZနာဂစ်၏ လက်ဆောင်မွန် - TNA - မောင် ပေသစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - TNA - surmiလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - TNA - surmiပေါင်းစု - Ma Ma - padonmarကိုပေါက်(မန်းလေး)၊ ဆြာအုပ်၊ Mလုလင်3in 1 - (ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲ) - TNA - Mလုလင်Sakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - TNA - မောင် ပေတံတွေးစွပ်ခဲ့ပါ နိုင်းနိုင်းစနေ - လူ ဟား - မောင် ပေဆြာအုပ်ကလိထားတဲ့ HDR - မောင် ပေ - ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ်ကဲ...သတိ...သတိ - ဦးဦးပါလေရာဒေဝေါ ဆိုသည်မှာ - surmi - ကြက်အူလှည့်Floral Gift - Macro Series - ကြက်အူလှည့် - Miss Crystallineဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - surmi - Foreign Residentစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - surmi - padonmarဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - San Hla Gyi - Foreign ResidentCongress - surmi - padonmarသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - Mလုလင်ကွက်လပ်ဖြည့်စိတ်ဓါတ် - padonmarစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - padonmar - padonmarဖိုင်နယ်မှာ အပိုင်တွယ်မှာက - Myo Thant - သခင် mobileသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - nicolus agral - uncle gyiအိုဘယ့် ...ခရီးသည် - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - Mr. MarGa - ko pauk mandalayခရီးသည်လေးသို့ - အလင်း ဆက် - လင်းဇော် ထက်မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - အလင်း ဆက် - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Foreign Resident - မဟာရာဇာ အံစာတုံးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67526 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62187 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59613 Kyats )MaMa (58115 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...